Nooca cusub ee Linux 5.13 wuxuu la yimid horumarin xagga amniga ah, taageerada Apple M1 iyo in ka badan | Laga soo bilaabo Linux
Nooca cusub ee Linux 5.13 wuxuu la yimid horumarin xagga amniga ah, taageerada Apple M1 iyo in ka badan
Shalay Linus Torvalds ayaa sii daayay nooca 5.13 ee kernel-ka Linux kaas oo lagu bixiyo taageerada bilowga ah ee loo yaqaan 'Apple M1 chip' cusub taageero aasaasi ah, astaamaha amniga cusub loogu talagalay Linux 5.13 sida Landlock LSM, taageerada Clang CFI iyo awoodda lagu kala soocayo isugeynta miisaanka ee nidaam kasta oo wicitaan ah, iyo sidoo kale sTaageerada FreeSync HDMI iyo hirgelinta bilowga ah ee Aldebaran, iyo kuwo kale.
Qiyaastii 47% dhammaan isbeddelada lagu soo bandhigay 5.13 waxay la xiriiraan wadayaasha qalabka, qiyaastii 14% isbeddelada waxay la xiriiraan cusbooneysiinta koodh gaar ah oo loogu talagalay qaab dhismeedka qalabka dhismaha, 13% waxay la xiriiraan xirmooyinka shabakadda, 5% waxay la xiriiraan nidaamyada faylka iyo 4% la xiriira nidaamka hoose ee hoose.
Torvalds ayaa ugu yeeray nooca cusub "mid aad u ballaaran."
“Waxaan soo joognay usbuuc xasilloon tan iyo rc7, mana arko sabab aan dib ugu dhigo 5.13. Jadwalka usbuuca waa yar yahay, oo kaliya 88 waxqabadyo aan la isticmaalin (iyo qaar ka mid ah waa uun dib u celin). Dabcan, intii usbuucii la soo dhaafay ay yaraayeen oo ay xasilloonaayeen, 5.13 guud ahaan waa ay ballaaran yihiin. Xaqiiqdii, waa mid ka mid ah noocyada ugu muhiimsan ee 5.x, oo leh wax ka badan 16.000 oo la galay (in ka badan 17.000 haddii aad tiriso midowga), oo ka yimid in ka badan 2.000 oo horumariyayaal. Laakiin tani waa dhacdo guud, mana aha dhacdo gaar ah oo lagu kala sooco dabeecaddeeda aan caadiga ahayn, ayuu qoray Torvalds.
Astaamaha ugu muhiimsan ee cusub ee Linux 5.13
Mid ka mid ah astaamaha cusub ee ugu muhiimsan ee Linux 5.13 kernel ayaa ah taageerada bilowga ee Apple's M1 chips, taas oo xilligan waxaad haysataa oo keliya taageerada qalabka iyo koodhka fulinta, laakiin waxyaabo badan ayaa la filayaa. Dardargelinta sawirada wali lamahelin, laakiin waxaa lafilayaa in qeybaha soosocda taageerada bilowga horeyba loo heli doono sidoo kale.
Wararka kale ee lagu soo bandhigo Linux 5.13 ee la xiriira amniga ayaa ah Landlock, oo ah aalad cusub oo nabadgelyo oo lagala shaqeyn karo SELinux si loo maareeyo hababka. Waxay u oggolaaneysaa in la xaddido isdhexgalka hababka kooxda deegaanka ee dibedda oo lagu horumariyo aragtida qaababka go'doominta sida Sandbox, XNU, Capsicum's FreeBSD iyo OpenBSD Pledge / Unveil.
Caawinta Landlock, geeddi-socod kasta, oo ay ku jiraan kuwa aan xididaysnayn, ayaa si kalsooni leh loo go'doomin karaa iskana ilaali inaad ka gudubto go'doominta haddii ay dhacdo u nuglaanta ama isbeddelada dalabyada xun. Landlock waxay awood u siineysaa geeddi-socod si loo abuuro sanduuqyo qashin ah oo ammaan ah oo loo hirgeliyo sida lakab dheeri ah oo dusha sare ah hababka xakamaynta helitaanka nidaamka jira. Tusaale ahaan, barnaamij wuu diidi karaa gelitaanka faylasha ka baxsan galka shaqada.
Sidoo kale kobcinta dhismaha RISC-V waa la muujiyay, tan iyo markii qaybtan cusub ee taageerada kexec, daadinta shilalka, kprobe iyo soosaarida xarkaha ayaa lagu hirgeliyaa meeshiisa (fulinta goobta, fulinta asalka asalka ah, iyada oo aan la koobiyeynin RAM)
Intaa waxaa dheer loogu talagalay processor-yada casriga ah ee Intel, xakamaynta qaboojinta cusub ayaa lagu guuleystay, Taageerada bilowga ah ayaa sidoo kale la siiyay nidaamyada cusub ee soo-saarahaan, Alder Lake-S brand (jiilka 12-aad).
Halka loogu talagalay AMD waxay muujineysaa taageerada FreeSync ee HDMI, Taageerada ASSR (Dib udajinta Abuurka Furaha Beddelka ah), ioctl si loo waydiiyo codbixinta fiidiyowga iyo awood u lahaanshaha, iyo qaab CONFIG_DRM_AMD_SECURE_DISPLAY si loo ogaado isbeddelada shaashadaha muujinaya macluumaadka muhiimka ah. Taageerada habka keydinta awoodda ASPM ayaa lagu daray.
Isbadalada kale ee taagan ee nuqulkan cusub:
Taageerada loogu talagalay tarjumaadda isla mar ahaanta ah (TLB) Lookup Buffer Dump oo loogu talagalay faa'iidooyinka waxqabadka yar yar Xaqiiqdii, Linux maareynta maareynta 5.13 x86 waxay bixisaa waxqabad yar oo waxtar leh oo si gaar ah faa'iido u leh marka la eego yaraynta amniga CPU ee sannadihii la soo dhaafay ee saameynaya TLB.
Taageerada AMD Zen ee Turbostat.
Loongson 2K1000 qaybta.
KVM waxay bixisaa kobcinta AMD SEV iyo Intel SGX ee mashiinnada dalxiiska martida.
Taageerada ogaanshaha qufulka baska Intel ayaa lagu daray marka lagu daro taageerada jirta ee lagu ogaanayo qufulka lakala saarayo.
KCPUID waa utility cusub oo geedka ah si looga caawiyo qaabeynta processor-yada x86 cusub.
Darawal kumbuyuutareedka muuqaalka USB-ga ah ayaa lagu daray dejimaha sida adeegsiga Raspberry Pi Zero sida adabtarada muuqaalka.
Taageerada "Teknolojiyada Korjoogteynta Maskaxda ee Intel DG1" / madal telemetry.
Darawalka POWER9 NVLink 2.0 ayaa looga saaray sababo la xiriira la'aanta ilaha furan ee isticmaalaha.
Cusbooneysiinta darawalka Maareeyaha Abaalmarinta Tooska ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » GNU / Linux » Nooca cusub ee Linux 5.13 wuxuu la yimid horumarin xagga amniga ah, taageerada Apple M1 iyo in ka badan
IPFS 0.9 waxay la timaaddaa nidaamkeeda xallinta DNS, kor u qaadista amniga iyo waxyaabo kale oo badan
Cube 2 Sauerbraten: Ciyaar kale oo xiiso leh oo casri ah oo loo yaqaan 'FPS' oo loogu talagalay GNU / Linux